Malunga nathi -I-Shenzhen Walkers Industrial Co, Ltd.
Ngeminyaka eli-10 esakhulayo, siye sakhonza abathengi abavela kumazwe angaphezu kwekhulu kwihlabathi liphela, njenge-US, UK, Australia, iJamani, iRashiya, iBrazil, i-Indiya, iSpain, njl. Sinikezela ngemeko ekumgangatho ophezulu, kwaye sibanceda baphumelele ibhidi kwaye bagqibe iprojekthi. Kwangelo xesha, sifumana ingxelo yabo elungileyo kwaye sibe ngamaqabane anyanisekileyo nanokuthenjwa ixesha elide.
Umzi-mveliso wethu ugubungela ummandla weemitha zesikwere ezingama-5000 kwaye uqeshe abasebenzi abangaphezulu kwe-150 okwangoku. Umzi-mveliso omtsha ubekwe kwiJewelry Industrial Park eChangping Town Dongguan City. Lo mzi-mveliso ngowenkampani yethu.
Sinabasebenzi abali-10 be-R & D, ubunjineli kunye nabasebenzi abanokwenza i-tablet entsha yoyilo kunye ne-e-reader imeko yokugcina amatyala amatsha kwintengiso, okwangoku, sinokwenza iisampulu ezintsha ngokomsebenzi wobugcisa nangaliphi na ixesha ukuhlangabezana nezicelo ezahlukeneyo zabathengi .
Ngezixhobo ezi-5 zokuprinta i-UV, sinokuvelisa nayiphi na imifanekiso emnandi eprintiweyo ukuhlangabezana neemfuno zesiko, i-150 yeentonga ezinemigca emi-5 yemveliso, imveliso yemihla ngemihla ifikelelwe kwiziqwenga ezili-10,000, samkela i-OEM, i-ODM eyenziwe ngokwezifiso kunye ne-ETA iintsuku ezi-7 ukuya ku-10 zokusebenza kunye nabathengi ' logo. Sigcina isitokhwe esikhulu samatyala okuthengisa ashushu aqhelekileyo anjenge-slim fold slim case kunye neemeko zebhodi yezitshixo yeetafile kunye ne-e-readers ngaphandle kwesicelo se-MOQ. Sineqela lobungcali lolawulo lomgangatho, iimeko nganye ziya kujongwa ngaphambi kokuhambisa. ukuba kukho nawuphi na umcimbi osemgangathweni, siya kuqalisa ukulahleka ngokupheleleyo.
Kwixesha elizayo, siya kuqhubeka ukuqhubela phambili kwaye sivelise imeko esemgangathweni kunye necala elithandwayo lokugubungela. Enkosi kumthengi ngenkxaso kunye neengcebiso zenkampani yethu, nangaphezulu, inkxaso yakho ngamandla empumelelo yethu. Siyathemba ukuba sinokuqhubeka nokusebenzisana okuhle ixesha elide. Ngenxa yenkxaso yabathengi, sikholelwa ukuba singenza ngcono kushishino lwe-elektroniki kunye nenkonzo yabathengi abangakumbi nangakumbi.
Izimo zakhe zengqondo, njengoko ityala lethebhulethi ligubungela ukuthengisa ngokubanzi, eyona mveliso yethu inesiphatho sephepha esiqulathe ipenisile, ithebhulethi!